CHUCKY ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၏ကျိန်စာ - ရုပ်ရှင်များ
Curse Of Chucky သည်အလွန်ဆိုးရွားလှသည့်ရာဇ ၀ တ်မှုအရူးအမူးစွဲမက်ဖွယ်အကောင်းဆုံးရာဇ ၀ တ်သားကောင်များကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခြင်း၊
သုံးသပ်ချက် - Chucky ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၏ကျိန်စာ
ပြန်လည်သုံးသပ်သည် -Matt Donato
Onအောက်တိုဘာ ၇၊ ၂၀၁၃နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည် -၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီ ၅
ဒွန် Mancini ရဲ့ပြည်နယ်နှင့်အတူ ကလေးကစားခြင်း ကြောင့်လိုက်တယ် flux အတွက်မျောဂိမ်း Chucky ၏အမျိုးအနွယ် ရှုပ်ထွေး၊ ရယ်စရာကောင်းသော၊ ကျိန်စာ၏ကျိန်စာ ရောနှောစိတ်ခံစားမှုနှင့်အတူလာ။ - အသစ်တစ်ခုကိုမျှော်လင့်ချက်။ ဤသည် Glen / Glenda ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွှတ်ဖို့မန်စီနီရဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပြီးပို။ ပို။ သတင်းအချက်အလက်ပို။ ပို။ သတင်းအချက်အလက် Chucky ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်သတ်ဖြတ်မှု Spree အပေါ်ယိုစိမ့်စတင်အဖြစ်ပရိသတ်တွေကတိတော်ကိုမြင်စတင်ခဲ့သည်။ အမြန်သန့်ရှင်းတဲ့ပုံသဏ္sportာန်အသစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Franken-Chucky အမာရွတ်တွေဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီး Tiffany၊ Glen / Glenda တို့မပါခဲ့ပါဘူး။ နောက်တွဲယာဉ်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်မှုများရှိခဲ့ရင် Andy Barclay မရှိပါဘူး။ သားကောင်အသစ်များ၊ ပုံပြင်အသစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မုန်းသောအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်း - ကျိန်စာ၏ကျိန်စာ အမှောင်ထုထဲပြန်ဝင်ချင်တိုင်း Chucky နှင့်စတင်ခဲ့သည် ဘယ်သူလဲ
ကျိန်စာ၏ကျိန်စာ မိသားစုအသစ်တစ်ခုနှင့်မိတ်ဆက်ပေးသည်။ Nica (Fiona Dourif) နှင့်သူမ၏မိခင်စာရာ (Chantal Quesnelle) တို့သည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောစာတစ်စောင်ကိုစာတိုက်မှရရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထုပ်ကိုဖွင့်ပြီးနီကာသည်ကောင်းသောကောင်လေးအရုပ်ကိုတွေ့သည်။ သို့သော်သူသည်အဘယ်ကြောင့်စေလွှတ်လိုက်သည်ကိုမသိသော်လည်းစာရာကထိုရုပ်ကိုလွှင့်ပစ်လိုက်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Good Guy အရုပ်ကို Charles Lee Ray ရဲ့စိုးလ်ကအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုငါတို့သိတယ်။ စာရာဟာညသန်းခေါင်မှာသိသာတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေမှုနဲ့အတူသေဆုံးသွားတာကိုငါတို့သိတယ်။ ကြီးမားသောဗလာကျင်းသောအိမ်ကြီးတွင်နီကာကို ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများစုဆောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် Chucky နှင့်အတူအိပ်မက်ဆိုးကိုမည်သူဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မည်နည်း၊ မည်သည့်အံ့သြဖွယ်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖွင့်ဟလိမ့်မည်နည်း။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်သည်ကလေးကစားခြင်းဒဏ္discussာရီအကြောင်းကိုဤနေရာမှဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းအနေဖြင့်တစ်လျှောက်လုံးတွင်တွေ့ရသောလှည့်ကွက်များနှင့်အလှည့်များစွာကိုစဉ်းစားသောဖျက်လိုဖျက်ဆီးသူများရှိလိမ့်မည်။ ကျိန်စာ၏ကျိန်စာ ။ သင်ရုပ်ရှင်ကိုမမြင်ရပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင်ကိုယ်တိုင်စွန့် စား၍ ဖတ်ပါ။ ၎င်းသည်တိကျသောဖျက်ဆီးသူသတိပေးချက်ဖြစ်သည်။
ကျိန်စာ၏ကျိန်စာ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ရှိစာဖတ်သူများအားဗြောင်ကျကျသတိပေးသည့်အလွန်ကောင်းသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်မဟုတ်ပါကနောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ပုံများကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အားလုံး ၀ အံ့အားသင့်စေခဲ့သောဆက်သွယ်မှုပရိယာယ်အားလုံးကိုပျက်စီးစေလိမ့်မည်ဟုမထင်ခဲ့သကဲ့သို့ အချို့သောအလေးအနက်ထုတ်ဖော်ဖျက်ဆီး။ မန်စီနီကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုချန့်ကအမာရွတ်များကိုတွန်းထုတ်ပြီးသူ၏လုပ်ရပ်ကိုသန့်ရှင်းစေသည်ဟုယုံကြည်သည်နှင့်အမျှ Chucky ၏အမာရွတ်များ၊ Tiffany ၏ရောက်ရှိမှုနှင့် Andy Barclay တို့၏နောက်ဆက်တွဲခရက်ဒစ်မြင်ကွင်းများပြိုကွဲခဲ့သူများအားငါသနားသည်။ တိုင်းပန်ကာသိသော Chucky ဝuniverseာ။
တစ် ဦး ကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ tonal ပြောင်းကုန်ပြီအဖြစ်, ဒီပန်ကာများအတွက်အများကြီးသက်သာမှုနှင့်အတူရောက်လာတယ် Chucky ၏အမျိုးအနွယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင့်အရွယ်အစားလူသတ်သမားကိုခြေဆွံ့သူ၊ နုပျိုသောဟာသနှင့်အားနည်းသောဆက်ဆံရေးဟာသတစ်ခုမျှသာဖြစ်လာပြီး Chucky ရုပ်ရှင်အနီးတွင်မရှိ။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သည်မန်စီးတီးကိုတစ်ကျော့ပြန်ပြန်လာစေခဲ့သည် ကလေးကစားခြင်း နည်းစနစ် Chucky ၏ထိတ်လန့်ဖွယ်ထုတ်ဖေါ်မှုကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တည်ငြိမ်သောထိတွေ့မှုမှတစ်ဆင့် Chucky ၏အမြတ်ထုတ်မှုများကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ အတိတ်ရုပ်ရှင်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Chucky သည်လူသတ်မှုရှိသောအရုပ်ရှိသောအရုပ်ဖြစ်သည်ကိုလက်ခံခဲ့သည်၊ မူရင်းအတွက် stupendous ထိတ်လန့်ခဲ့ရာဖုံးကွယ်ရန်မအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ် ကလေးကစားခြင်း သို့သော်ထိုသို့ပြုရာတွင်၎င်းအလွန်ဆိုးရွားလှသည့်မငြိမ်မသက်သောမှော်အတတ်အချို့ပျောက်ဆုံးသွားသည်၊ အကြောင်းမှာ Chucky သည်သူ၏ကောင်းကျိုးအတွက်အနည်းငယ်လွန်းနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကျိန်စာ၏ကျိန်စာ ဤအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်။ လမ်းဘေးဟာသကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး Chucky အား ထပ်မံ၍ ကြောက်စရာအင်အားဖြစ်စေသည်။ သူမပလတ်စတစ်ရင်သားများကိုအရောင်တောက်တောက်ဖြစ်စေသော Fangoria မဂ္ဂဇင်းများသို့မဟုတ် Tiffany တို့အားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိတော့ပါ။ Chucky သည်အကြမ်းအားဖြင့်အကြမ်းမဖက်၊ ရက်စက်မှုရှိသော်လည်း၎င်းသည်တူညီသောဆတ်ဆတ်ဒဏ်ရာရှိသည့်တစ်ချောင်းကြိုးများကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သေးသည်။
Mancini သည်ယခင်ဂိမ်းများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်အနည်းငယ်လုပ်ဆောင်သည်။ ပွင့်လင်းသောကွက်လပ်အား flashbacks နှင့်အံ့အားသင့်စရာ cameos များဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်စုံတစ်ရာခံစားရသည်ဟုခံစားရသည် ကျိန်စာ၏ကျိန်စာ ပို။ ပို။ ပိုကောင်းပိုကောင်းနောက်ဆက်တွဲမှအပေါ်ကိုရွှေ့နိုင်အောင်ပို။ ပို။ umentရာမဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီးနီကာရဲ့အကြီးအကျယ်ညဥ့်တစ်လျှောက်လုံးသေဆုံးမှုနှင့်ဇာတ်လမ်းကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်အောင်ရိုးရှင်းစွာဖြည့်အပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်ပါ, နီကာရဲ့မိသားစုချားလ်စ် Lee က Ray မှဆက်သွယ်ခဲ့? TIFFANY သည်ရှင်သန်နေပြီး Chucky အားသူ၏နောက်ထပ်ပစ်မှတ်သို့ပို့လိုက်သည်။ ဖုန်းကိုကိုင်ထားပါ၊ Chucky သည်သူ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအောင်မြင်စွာလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သလား။ စောင့်, အန်ဒီ BARCLAY့CHUCKY သတ်ပစ်?! ကျိန်စာ၏ကျိန်စာ ဆင်းရဲသော Nica သည်လန်းဆန်းဖွယ်ကောင်းသော Chucky ဗားရှင်းကိုတိုက်ထုတ်ရန်တွန်းအားပေးသော်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးကြောက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် Mancini ၏လှည့်စားခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ရယူထားသောအားရကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသော Charles Lee Ray ပရိတ်သတ်များသည်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းသည့်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောမြင့်တက်မှုကိုစွန့်ခွာသွားမည်ဖြစ်သည်။
Fiona Dourif သည်လေ့လာသုံးသပ်နိုင်လောက်သောအမဲသားတစ်ခုတည်းသောဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပြီး၊ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ဖြင့်သာကန့်သတ်ထားသောဇာတ်ကောင်အနေဖြင့်သူမ၏ဖခင်မှထုတ်လွှင့်သောလူရွှင်တော်အရုပ်မှထွက်ပြေးနေစဉ် Fiona သည်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Chucky အားဖြင့်အကြမ်းဖက်ခံရမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်လှေကားသည်ရန်သူနှင့်တူညီသောအခါလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းဖြစ်သည်။ Chucky မှဝေးဝေးရှောင်ထွက်သွားရန်လိုအပ်သော်လည်း Nica သည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကိုတိုက်လှန်ရုံသာမကစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုကိုပြသနေသည့်ရိုးရှင်းသောကစားစရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီမိသားစုကိုဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်တယ်လို့ဘယ်သူမှမယုံသောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော၊
သို့သော်လက်တွေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရုပ်ရှင်များကို Chucky အတွက်ကြည့်ရှုသည်။ နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့် Brad Dourif ၏ဒဏ္actingာရီစကားသရုပ်ဆောင်မှုကြောင့် Chucky သည်သူ၏ဘဝ၏အကောင်းဆုံးပုံသဏ္isာန်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်နီကာနှင့်အတူကစားစဉ် Chucky သည်သူ၏သားကောင်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှည့်ပတ်။ လှည့်ပတ်သွားသောကြောင့်ရုပ်သေးရုပ်တစ်ခုတည်းသာရှိသည်။ Chucky သည်နီကာနောက်ကွယ်မှလမ်းလျှောက်သွားစဉ်သူ့ကိုယ်သူလွှမ်းမိုးထားသည့်အင်အားတစ်ခုဟုအခိုင်အမာဆိုသကဲ့သို့သူမပိုမိုကွာဟမှုသည် ပို၍ ပင်မျှော်လင့်ချက်မဲ့လာသည်။ သွားပြီမကောင်းတဲ့ပြက်လုံးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, နောက်ကျောအိပ်မက်ဆိုးကျက်စားတဲ့ cackling ရယ်မောခြင်းနှင့်အတူ Chucky ရဲ့ခြိမ်းခြောက်, ပုပ် - ပါးစပ်ကဲ့ရဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သူ၏တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုသိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ ထို့အပြင်သူ၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားသော screen time လည်းရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သူ၏မီးမောင်းထိုးသည့်အချိန်လေးများကိုပိုမိုလေးလံစေပြီးပိုမိုကြောက်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါဟာငါလိုချင်သော Chucky၊ ငါတို့ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် Chucky၊ ဒါကငါတို့ပတ်ပတ်လည်နေရန်လိုအပ်သော Chucky ဖြစ်သည်။
ကျိန်စာ၏ကျိန်စာ ကျေးဇူးတင်စရာ Chuck ရဲ့ဟာသ schtick မှထွက်ခွာခြင်းနှင့်မှောင်မိုက်, seedy, playfully demented ခံစားမှုနုပျို ကလေးကစားခြင်း ရုပ်ရှင်များအတွက်လူသိများသင့်ပါတယ်။ Chucky သည်တရားရုံးတွင်ပြက်ရယ်ပြုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သူသည်အပြစ်မဲ့သောကိုယ်ခန္ဓာ၌တွယ်ကပ်နေသည့်ကြောက်မက်ဖွယ်မကောင်းသောဆိုးရွားပြင်းထန်သောလူသတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်များအားလုံးပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတွင်ဂိမ်းမာစတာဒန်မန်စီနီကဇာတ်ကောင်အသစ်များ၊ သားကောင်အသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်၊ သို့သော်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည့်မျက်နှာများကိုပုံပြင်ထဲပြန်သွင်းပေးသည် (Tiffany သည်ပြneverနာမရှိခဲ့ပါ၊ Jennifer Tilly သည် Chucky ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်အချို့တွင်းနက်ကြီးများကိုချုပ်ပေးသည်။ ဒီဂိမ်းဟာအခွင့်အရေးတွေကုန်လွန်သွားတာဖြစ်သင့်တယ် Chucky ၏အမျိုးအနွယ် ဒွန်မန်စီနီသည်ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေကိုကောင်းမွန်သောဇာတ်လမ်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေမည့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအနာဂတ်အရစ်ကျများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအသစ်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အသတ်ခံရသော၊ ဆံပင်နီရဲနေသောနတ်ဆိုးအရုပ်ကိုဘယ်တော့မှမရေတွက်ပါနှင့်။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေသောပရိသတ်များက Chucky ကိုရေတွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်းသူသည်မိမိဓားကိုဖယ်။ သူ၏အပျော်တမ်းဟာသစာအုပ်ကိုဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်ပြီး၎င်းအတွက်ပိုမိုပြင်းထန်သော slasher icon ဖြစ်လာသည်။
Curse Of Chucky သည်အလွန်ဆိုးရွားလှသည့်ရာဇ ၀ တ်မှုနှင့်အရောင်အသွေးစုံလင်လှသောရာဇ ၀ တ်သားကောင်များကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခြင်း၊
မင်းရဲ့သင်္ချိုင်းကို ၂၀၁၀ မုဒိမ်းကျင့်တဲ့နေရာမှာငါတံတွေးထွေးတယ်
အဆိုပါ flash ကို၏အလိုတော်ရာသီ5ထွက်လာကြသောအခါ
capcom3အထူးရွေ့လျား vs အံ့ဩ
Scott သတ်သေကစားသမားအတွက်ဇာတ်ကောင် eastwood
jedi မာစတာ sifo-dyas သူသည်